Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment आज सुनचाँदीको भाउ कति छ ? - Pnpkhabar.com
आज सुनचाँदीको भाउ कति छ ?
काठमाडौं, २ जेठ : आज साताको पाँचौ दिन अर्थात बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य सामान्य रुपमा बढेको छ । हिजो बुधबार प्रतितोला ६० हजार ६ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छापावाला सुन आज एक सय रुपैयाँले बढेर ६० हजार ७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि बढेको छ । आज तेजावी सुन प्रतितोला ६० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्यमा भने कुनै परिबर्तन भएको छैन । हिजो प्रतितोला ७२५ रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य आज सोहि मुल्यमा नै कायम रहेको महासंघले जनाएको छ।